မြန်မာ Street Photography Page တွေရဲ့နောက်ကွယ်က ဘာသာပြန်ဆောင်းပါးတွေရေးနေသူတစ်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (ကိုနိုင်သူစိုးသို့ ပြန်ကြားချက် ) – Featured Collectives
ပထမဦးဆုံး ကိုနိုင်သူစိုးကို မေးခွန်းတွေအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောလိုပါတယ်။ နောက်လာမဲ့ FCအင်တာဗျူးတွေမှာ ဒီမေးခွန်းတွေကို ဖြေစေချင်တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ ကိုချစ်က ဖြေဆိုတော့ ကျနော် ဝင်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းတွေဟာ Street ရိုက်သူတွေ တစ်ချိန်ချိန်မှာ မိမိကိုယ်ကို မေးလာရမယ့် မေးခွန်းတွေပါပဲ။ ကျနော်တို့တတွေ Street ပုံတွေရိုက်နေရုံသာမျှမဟုတ်ဘဲ ဘာကြောင့်၊ ဘာလို့၊ ဘာကို၊ မိမိရဲ့ လာရာ၊ လားရာ စတာတွေ မိမိကိုယ်ကို မေးနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီမှာ ကျနော် ပြန်ဖြေတာတွေဟာ ကျနော့် ယူဆချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေများနဲ့ ကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ဒီလိုကွဲပြားမှုတွေကို ကြားချင်ပါတယ် (နောက်လာမဲ့ FCအင်တာဗျူးတွေကို စောင့်နေတယ်)။ မေးခွန်းတွေကို နံပါတ်တပ်ထားတဲ့အတွက် နံပါတ်လိုက်ပဲ ဖြေသွားပါ့မယ်။
၁) ပုံစရိုက်ရင် ဘယ်အရာက သင့်ကို ပထမဦးဆုံးဆွဲခေါ်သွားပါသလဲ ပြီးတော့ မင်းဘယ်လိုလေ့လာစူးစမ်းခဲ့သလဲ။
ဒီမေးခွန်းမှာ နှစ်ပိုင်းပါပါတယ်။ ဘယ်အရာက သင့်ကို ဆွဲခေါ်သလဲဆိုရာမှာ ယခုလက်ရှိအချိန် စာရိုက်နေချိန်မှာ ဘယ်လိုမှ ဖြေလို့မရပါဘူး။ လမ်းပေါ်ရောက်ရင်တော့ ကျနော် ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ရာက စိတ်ဝင်စားရာတွေရိုက်ဖြစ်တယ်။ ကျနော့်ကို ဘာက ဆွဲဆောင်သလဲ တိတိကျကျ မပြောနိုင်ပေမဲ့ မြင်ရင်တော့ သိပြီး ရိုက်တာပါပဲ။ ဘယ်လို စူးစမ်းသလဲဆိုတာကတော့ Street ဆိုတာ ဘာလဲ သိချင်လို့ အင်တာနက်ကနေ ရှာဖွေကြည့်ခဲ့တာပါပဲ။
၂) ပုံရိုက်ဖို့အတွက် အချိန်ကာလရွေးချယ်သလား
ရွေးလေ့မရှိပါဘူး။ ကြုံတဲ့အချိန် ရိုက်ပါတယ်။ ရိုက်ဖြစ်အောင် သွားလေရာ ကင်မရာသယ်တယ်။ မသယ်ဖြစ်တဲ့အခါတိုင်း ရိုက်လို့ရမဲ့အကွက်တွေ လက်လွှတ်ရတတ်တယ်။
၃) သင့်မှာ street photography နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတ်မှတ် ကန့်သတ်ချက်ရှိလား (ဥပမာ mm ဘယ်လောက်နဲ့ ရိုက်တာတို့၊ light and shadows only ရိုက်တာတို့၊ Rules လိုက်နာတာ ဖောက်တာတို့)
Street ရိုက်တာမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေကို မေးထားတယ်။ မေးခွန်းက ရိုက်ကူးပုံ နည်းစနစ်တွေအကြောင်းပေါ့။ အဲဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကန့်သတ်ချက်က လောလောဆယ် 28mm lens နဲ့ ရိုက်နေတာတစ်ခုပါပဲ။ ကျန်တဲ့ focal length တွေနဲ့ မရိုက်ဖြစ်တာက lens မရှိတာလည်းပါတယ်။ ဖရိမ် အကြပ်တွေ မကြိုက်တာကြောင့်လည်းပါတယ်။ light and shadows တို့လို့ တစ်မျိုးတည်း ကွက်ပြီး ရိုက်လေ့မရှိပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ တစ်နေလုံး ပုံစံဘောင်တစ်ခုအတွင်းမှာပဲ လိုက်ရိုက်ဖြစ်တာမျိုးရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ လမ်းပေါ်မှာ ရိုက်စရာရှိတာ ရိုက်လိုက်တာပါပဲ။ ပြီးမှ ပြန် edit လုပ်တော့မှ မေးခွန်းက မေးထားသလိုမျိုး ပုံတစ်ပုံ အလုပ်ဖြစ်မဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန် ချိန်ဆကြည့်တာပါပဲ။
၄) အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ street photo နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင် လေ့လာမိသလောက် ဘယ်လိုထင်မြင်ပါသလဲ။ ဘာက အရေးပါပါသလဲ။
အမှတ်တရဆိုရာမှာ ခေါင်းထဲ အမြဲပေါ်တာက HCB ရဲ့ လူတစ်ယောက် လမ်းပေါ်က ရေကွက်ပေါ်ခုန်ကျော်နေတာနဲ့ စက်ဘီးဖြတ်သွားတာကို ကြောင်လိမ်လှေကားပေါ်ကနေ ရိုက်ထားတာတွေက စံထားရတဲ့ ပုံတွေပါပဲ။ HCB ရဲ့ ကွန်ပိုဇေးရှင်းကို အမြဲအားကျတယ်။
၅) Street photography နဲ့ contemporary art နဲ့ ဘယ်လို ဆက်စပ်လို့ရတယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ။
ခု အချိန်မှာတော့ ဓာတ်ပုံဟာ အနုပညာပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ပြတိုက်ကြီးတွေကပါ ဝယ်ယူစုဆောင်းနေပါပြီ။ အနုပညာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ အယူဝါဒတွေကွဲပြားပြီး ဖန်တီးကြသလို ဓာတ်ပုံမှာလည်း အတူတူပါပဲ။ Street photography မှာလည်း classic အယူအဆနဲ့ရိုက်ကြသူတွေရှိသလို abstract အယူအဆနဲ့ ရိုက်သူတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။
၆) What do you want your viewers to take away from your work?
လမ်းပေါ်မှာ ကျနော်မြင်လိုက်တဲ့ အရိပ်၊ အရောင်၊ အစရှိတာတွေကို တစ်စက္ကန့်ရဲ့ ၁၂၅ပုံ ၁ပုံ အခိုက်အတန့်လေးမှာ ဖမ်းယူသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပြီး ပြန်ပြတာပါပဲ။
၇) What were the difficulties you encountered first starting street photography?
Street photography စ ရိုက်တုန်းကတော့ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေကို ကင်မရာနဲ့ ချိန်ပြီး ရိုက်ဖို့ တော်တော် ခက်ခဲခဲ့တာပါပဲ။
၈) What are your thoughts and feelings about shooting individually (versus shooting withafriend or small group of friends) when out on the streets?
ကိုယ်နဲ့ ရင်ဘတ်ချင်းနီးစပ်သူတွေနဲ့ ထွက်ရိုက်ရတာ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ခဏတဖြုတ်နားရင်း သူဘာရိုက်ခဲ့လဲ ကိုယ်ဘာရိုက်ခဲ့လဲ ပြန်ကြည့်ပြီး လေ့လာလို့ရတာပေါ့။ တစ်ယောက်တည်း ထွက်ရိုက်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်ပါတယ်။ ကျနော့်အတွက် တစ်ယောက်တည်း ထွက်ရိုက်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
၉) ပုံရိုက်ရင်းနဲ့ ရှာတွေ့တဲ့ subject အပေါ်နှစ်မျောသွားပြီး မရိုက်ဖြစ်တော့တာတွေ ရှိပါသလား။
အတိုဖြေရရင် ရှိပါတယ်။ ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်မလာရင်တောင် ရိုက်ဖြစ်အောင်တော့ ရိုက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီး ဆက် ကြည့်နေလိုက်တာမျိုးပေါ့။
၁၀) သင်ဘာကြောင့် ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပါသလဲ။
ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖြစ်တဲ့ ကာလာအကြာကြီးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုက်ဖို့အမြဲစိတ်ရှိနေတယ်။ အဲဒီစိတ်နဲ့ပဲ ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ နောက်ပြီး မလုပ်ဖြစ်သေးတဲ့ ဓာတ်ပုံပရောဂျက်အတွက်။